အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: သူငယ်ချင်းများနှင့် အမှတ်တရသင်္ကြန်...
Posted by Pyiet Oo Aung at 1:45 AM
U guys look like A Boys Band!!!
Burmese Blogger Ganges who studies in Russia.., It's look ROCK!! And seen to be you guys have lot of funs..,
ဘာလဲဟ ဘလော့ဂ်ဂါတွေလား တီးဝိုင်းအဖွဲ့ လား ဟီး ဟီး သူများတွေစတိုင်ကျနေတာကို မနာလိုလို့ ပြောတာ...
ကောင်းတယ်ကွာ အခုလို စုစုစည်းစည်းနဲ့ လူငယ်တက်လူတွေ စုပေါင်းပြီး လူတွေကို အကျိုးပြုတဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ် ကို ထူထောင်မယ် ဆိုတာ ကြားရလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ် အောင်မြင်ပါစေ...။
တော်တော် မျက်နှာများနေကြတယ်ပေါ့။ ဟိုနားမှာလည်းတွေ့ ဒီနားမှာလည်းတွေ့တာကိုပြောတာပါ။ :P ။ နေရာတွေက အရမ်းလှတာပဲ။ အားလုံးကို ရေတစ်ဗုံးစီလောင်းသွားတယ်။ :P
ဟာ အားလုံးထဲမှာငါ့အစ်ကိုအချောဆုံးပဲ။ (ဘာမှဟုတ်ဘူးသူ့ဘလောခ်မှာမို့လို့ပြောတာ) ဟီးဟီး :P
A hunahun....... (((( ATTENTION PLS ))))
They all look pretty smart esp my Black Dream :), but Who would have thought they'd do something behind the camera.
Mr Clever didn't upload some of the official photos he had taken on that day. You have to be 18+ to get accessed.
Please Ask Black Dream Personally for those pics. Believe me, you won't regret it :P.
Btw, You guys are so cool.
အဟမ်းအဟမ်း.... ရုပ်တွေကတော့ ကိုစိုးထက်ကြီး ပေးထားတဲ့အမည်နဲ့တောင် မတန်လောက်သေးဘူး.. ဟီးဟီး...
ဟဘယ်လိုဖြစ်ဒါလဲ သင်္ကြန်လျှေက်လည်ဒါ ဘယ်သူမှရေမလောင်းဘူးလား? <0_0> <0_0> Sunglass နဲ့တယောက်က ဘယ်သူလဲ? :P Thanks for sharing LOL..
မျှားပြာ...ဘလက်ဒရင်းနဲ့ နတ်သျှင်နောင် ပဲလျှော့လို့ ဟိဟိ ဟင်းအရမ်းပျစ်နေပြီ...
တင့်ထူးရွှေ..ပုန်းမနေနဲ့ ထွက်ခဲ့လို့ (သူ့ကိုက်စားမှာကြောက်နေတယ်ထင်တယ် ...)ကုတ်တုတ်တုတ်လေး..း)
ငါ့သားမင်းကျန်စစ်ကတော့ ကျောမနေနဲ့ ဆရာကြီးဒီဇိုင်းနဲ့ ဟွန့် ကြည့်လို့ကိုမရဘူး (မမြင်ရလှို့) ဟိ
ကောင်းအောင် နင်အကျိင်္င်္ကိုငါမှတ်မိတယ်နော် (ဟိဟိ)
ဟဲ့ ..နင့်စတိုင်လ်ကလန်းတယ်သိလား (ရေတောက်ထားတာနဲတူတယ်...း)..........)
လာအားပေး သွားပြီ ... သိချင်တဲ့သူတွေ အားထုတ်လို့ ရအောင် အဖြေ ပေး မသွားဘူး ... :P
မကြာခင်မှာပေါ်ပေါက်လာမယ့် နာ့တယ်ရင်းတွေရဲ့တတ်သမျှ၊ သိသမျှ နည်းပညာအကြောင်းအရာဝက်ဆိုဒ် တွေကို လဲမျှော်လင့်စောင့်စားနေတယ်ကွ...း)
မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာ တယ်ရင်းလေးလဲ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံပါစေလို့ နာဆုတောင်းပေး လိုက်တယ်နော်...း) နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ ဘလော့စဖွင့်မဲ့ ကိုညိမ်းညိုကိုလဲ ဘလော့ရပ်ဝန်းကနေကြိုဆိုပါတယ်လို့
အမှတ်တရပုံလေးတွေအားလုံးကိုလဲ အမှတ်တရ ကြည့်သွားပါကြောင်း...:P
နင့်ဒီဇိုင်းကတော့လေ ဟိ ပန်းပန်းပြောသလိုပဲကွ...:P
ဟား...ဟား....ဟား... ပျောက်နေပါတယ် လို့ကြည့်နေတာ..
big blogger brothers........
ဝေးး ဆိုင်ဒ်တစ်မ ရိုက်ချလို့ တောင်မကျဘူး ဗျ ဂွတ်ဂွတ် အားလုံးကြည့်ကောင်းတယ် သေချာမမြင်ရလို့ဟီးး စတာ စတာ အင်္ကျီအဖြူနဲ့ပဲအများဆုံးအစ်ကိုကြီး အပဲဆိုး အဲ မှားးးးးးးးလို့အချောဆုံးပြောတား) အားကျတယ် စုစုစည်းစည်းနဲ့ ပျော်စရာကြီးးးးးးးးးးးး။
တကယ့်ကို အမှတ်တရ လေးပါပဲ။
hey, actually i really dunno what to comment...humm, u guys look great...Mr. BlackDream, Here is my advice for you >>> Don't smoke too much, look at urself, u look damn old now... :D
Happy New Year , my homie ..!!
မောင်မောင်ဂေါ်မစွံတွေကို လာရှိုးသွားတယ်နော်... ဒီရုပ်ကြီးတွေကို မှတ်မိအောင် သေချာရှိုးသွားတယ်... သင်္ကြန်တွင်းမို့ အားလုံးကို ရေလောင်းသွားတယ်... ပြီးတော့ အိုးမဲပါသုတ်သွားတယ်ဗျို့... ဟိ ဟိ... ၀က်ဆိုဒ်အောင်မြင်ပါစေလို့ မမဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်...
အမောစို့အောင် လုပ်တယ်......... တော်တော်ချိုးဒယ်
ပြီးတော့ ရောင်းစားပစ်မယ် ... မကြိုက်လို့ ခါးချို ခါးချိုနဲ့ ( ဟတ်ဟတ် )
ပိုက်ပိုက်ပျက်နေတာနဲ့အတော်ပဲ ............ ငှင်းငှင်းငှင်း
( ဂျီတော့လ် အကောင့်မှားသွားလို့ ၊ မပြင်တော့ဘူး :P )
ပျော်စရာကြီး ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်ရတာ။ ကွန်မန့် မပေးဘူးဆိုပြီး ပေးလိုက်အုံးမယ်။ မော်ဒယ်ရှိူးဆိုလို့ အပြေးလာတာ...လူတွေ ကြေညာနေတယ်။ တစ်ယောက်ဝယ်ရင် တစ်ယောက်အလကားရတယ်တဲ့ အဟဲ...ဈေးလည်းလျှော့ပေးမယ်တဲ့*သင်္ကြန်အကျ "discount"ဆိုပဲ...စိတ်ဝင်စားတဲ့သူများ
အမြန်ဆက်သွယ်ပါ။ [PH]:၁၈၀၀ ၂၃၂ ၅၂၉၀ :D ဟီးဟီး
ဓါတ်ပုံလေးတွေက တော်တော်လေးကို သဘာဝကျတယ် နောက်ရိုက်ရင် မီးမီးလေးကိုလဲခေါ်နော် မီးမီးလေးလဲ ရိုက်ချင်တယ်။ ဓါတ်ပုံက လှတာမလှတာ အဓိကမဟုတ်ဘူး စတိုင်းလေးက အဓိကပါ ဟိဟိ မေမိုးရိုက်ရင် စတိုင် လေးကို အတုခိုးလိုက်ပါဦးမယ် ဟဲဟဲ ပျော်ရွှင်သောနှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ။
ဘယ်တယောက်က မဟူရာအိပ်မက်တုန်း.. ပုံထဲမှာ နာ့ထက် ချောတာဆိုတာ နာမပါတာ တော်တော်ဆိုးတာပဲ ဟိ :P ပုံတွေက တကယ့်ကို စတိုင်တွေ မိုက်နေတယ်.. ကောင်မလေးများ သတိထား
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ ညီအကိုတို့ရေ.. ဂွတ်လပ်
စွံတယ်လို့ကြားတယ်နော် မျက်စိ မျက်စိ. :P
အတာရေ အေးအေးလေး လောင်းပါတယ်
အမှတ်တရပေါ့ ... အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ ..။
တတိယ ပုံမှာ ခင်ဗျားကို ခင်ဗျားညီမ အမှတ်နဲ့ ကြိတ်ဖက် ထားတာ ဘူကြီးလဲ ဗျ။ :P
Moscow MBS eh? =)
Wow! ခုနစ်ယောက်တန်းစီပြီး ထိုင်နေတဲ့ပုံလေးကြည့်ပြီးတော့ အငဲရဲ့ ခုနစ်ထွေအကကို သတိရသွားတယ်ဗျာ. ဟတ်ဟတ်. ကို BlackDream က ဘယ်နားမှာလဲ.
အောက်မှာ ဘာလို. ဆုငွေ ဘာညာဆိုပြီး မပါတာလည်း။။။
ဂေါ်မစွံ ဘလော့ဂ်တွေကိုး ဟ ဟ ။ မိုက်သကွ ပုံတွေက ။
ငါမလိုက်နိုင်လိုက်ဘူးကွ မဟုတ်ရင် ပိုပျော်ဖို့ ကောင်းမှာ ။း)
အဲဒါ Model တွေလား Blogger တွေလားကွ ဟေ.
အကုန် ချောတယ် ပြန်လာရင် မုန့်ဝယ် လာခဲ့ကြ ကြားလား
Myanmar Movie Free to Watch online.